Tallaabooyinka lagu beddelayo aquarium biyaha | Kalluunka
Hab kale oo lagu beddelo aquarium biyaha
In kastoo badalo biyaha aquarium-ku waa geedi socod fudud, runti maahan waxa dhalaalaya oo dhan waa dahab, sidaa darteed kalluunka oo xaaladdiisu ku hagaagsan tahay kuma filna in laga saaro dareeraha jira laguna daro midka cusub. Inta aan jidka ku sii jirno waa in aan qaadnaa tallaabooyin taxane ah, annaga oo dadaal gaar ah gelinayna mid kasta oo ka mid ah.
Maskaxda ku hay in biyuhu ay yihiin deegaanka ay xayawaanku ku nool yihiin, oo ay ku qaataan 24 saacadood maalintii. Daqiiqaduhu markay socdaan, wasakhda ayaa muuqaal samayn doonta, taas oo si gaar ah u noqonaysa mid aan raaxo lahayn. Fikradda ugu weyni waa in la helo a nadiifinta heer sare ah, iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo suufka wax lagu duubo si aagga oo dhami u dhalaalayo.
Waa kuwan talaabooyinka waa inaad raacdaa si aad biyaha u bedesho:
Biyaha ku shub aquarium-ka wax yar. Qiyaastii 20%, ka badan ama ka yar.
Hel biyaha cusub. Waa inaysan lahayn walxo kiimiko ah (iska tuur kontaynarrada ay horay ugu soo dhaceen) ama ha ka ahaadaan tubbada. Waxaa lagugula talinayaa inay nasatay saacado kooban si inta haray ay u baxaan.
Qalabka algae ku nadiifi, ku nadiifi kareemada. Waxyaabaha waa in laga saaraa laguna nadiifiyaa biyo iyo 10% warankiilo. Ku mayr iyaga oo ku sii daa hawo qallalan waa muhiim. Dhagaxyada sidoo kale waa in lagu sifeeyaa sifoon. Wasakhda waa in lagu kaydiyaa weel kale.
Markay wax waliba nadiif yihiin, ku dar biyaha cusub. Hubso inay tahay heerkul isku mid ah kii hore.
Sheeg inay jiraan qalab khaas u ah nadiifinta. Waxaad ka heli kartaa dukaan kasta oo xayawaan ah. Waxaad heli kartaa xoogaa talooyin ah hadiyad ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » DIY Aquariums » Hab kale oo lagu beddelo aquarium biyaha
Ogsijiin la’aan, dilaa malaayiin kalluun ah